Ekwela ọtụtụ ihe na Web Design gị | Martech Zone
Ejila otutu ihe na Web Design gị
Saturday, July 4, 2009 Thursday, June 29, 2017 Douglas Karr
Ọtụtụ n'ime ndị enyi m bụ ndị na-emepụta webụsaịtị - enwere m olileanya na ha agaghị ewe iwe na ọkwa a. Nke mbụ, ka m bido site na ịsị na nnukwu imewe weebụ nwere ike inwe mmetụta dị mkpa na ụdị ndị ahịa ị dọtara, ọnụọgụ nzaghachi nke atụmanya ịpị site na ya, yana mkpokọta ego nke ụlọ ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ nnukwu ọdịnaya nwere ike imeri atụmatụ adịghị mma, ị hiere ụzọ. Na laghachi na itinye ego na nnukwu atụmatụ a nwapụtaala ugboro ugboro. Ọ bụ nnọọ uru oge na-efu.
Nke ahụ kwuru… imepụta ihe dị ukwuu agaghị efu gị ihe ahụ, n'agbanyeghị. Usoro njikwa ọdịnaya weebụ nke oge a dị ka WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (maka azụmahịa), Ngosipụta Ngosipụta, wdg. niile nwere ọtụtụ isiokwu ha. Enwekwara ọtụtụ nhazi usoro weebụ, dị ka YUI Grids CSS, maka saịtị emere site na ncha.
Uru nke itinye usoro ndị a n'ọrụ bụ na ị nwere ike zoputa otutu nke oge weebụ gị na onye nhazi ihe osise. Ndị ọkachamara na-emepụta weebụ nwere ike iji $ 2,500 gaa $ 10,000 (ma ọ bụ karịa dabere na pọtụfoliyo na ntụaka nke ụlọ ọrụ ahụ). Enwere ike iji ọtụtụ oge ahụ iji mepụta nhazi peeji na CSS.
Kama ịkwụ ụgwọ maka nhazi na CSS, gịnị ma ị họrọ site n'ọtụtụ puku isiokwu a ewuworị ma nwee naanị ka onye ọrụ ihe osise gị na-arụ ọrụ na ihe osise? Akinggbaji nnukwu imepụta nke e wuru na Photoshop ma ọ bụ onye na-ese ihe na itinye ya na isiokwu dị adị na-ewe obere oge karịa ịmepụta ihe niile site na ncha.
Uru ọzọ nke iji usoro a bụ na nhazi ahụ nwere ike imetụta njikarịcha nchọta yana ojiji - ihe ndị mmepe isiokwu na-akpachara anya tupu ha ebipụta ma ree isiokwu n'ịntanetị. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ m bụ ndị ọrụ WordPress, otu n'ime saịtị m hụrụ n'anya maka nke a bụ WooThemes. Maka Joomla, ndị Gburugburu Rocket nwere nhọrọ dị egwu.
Otu ndụmọdụ ọzọ, mgbe ị denye aha ma obu zuta isiokwu ndị a - kpachara anya inweta ikikere ndị nrụpụta. Akwụkwọ ikike nke onye nrụpụta na WooThemes dị ihe okpukpu abụọ karịa ọnụahịa (ka na-amalite na $ 150!). Nke a na-enye gị ezigbo Photoshop faịlụ iji nye gị eserese omenka chepụta na!
Tags: DjangoDrupalNgosipụta NgosipụtaJoomlamagentoroketthemesWordPressYahoo UIyui grid css
Realzụ ahịa ụlọ ahịa n’ Onlinentanet agbanweela
Jul 4, 2009 na 7:33 PM
Ihe ndebiri CSS masịrị m http://www.webassist.com. Ọtụtụ ndị bụ n'efu, mana enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ maka obere ego.
Jul 7, 2009 na 1: 12 AM
Mgbe ụfọdụ webmasters anaghị atụkwasị obi na oge ole ka ịmegharị wiilị. Iji ndebiri na njikere ịga Gburugburu bụ ohere dị ukwuu na mgbe ụfọdụ Ohere adịghị. Jiri ya!
Akwa Post. Ga-alaghachi maka mmelite ndị ọzọ.
Jul 8, 2009 na 12: 47 AM
Ekwenyere m kpamkpam na nke a. Dịka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ anyị na-anwa iji isiokwu yana koodu omenala iji kwụọ ụgwọ ebe nrụọrụ weebụ dị ala dị ka o kwere mee.
Michael Reynolds kwuru
Jul 10, 2009 na 4: 13 AM
Echere m na ọ dabere na ụdị ụlọ ọrụ a na-ahazi saịtị ahụ maka.
Ekwenyere m na e nwere ọtụtụ ndebiri dị ebe ahụ nke nwere ike ime ka o kwe omume ịmepụta weebụsaịtị mara mma na ọnụ ala. Heck, blọgụ nke m bụ ndebiri nde 100 na m hụrụ ya n'anya!
Agbanyeghị, ndebiri anaghị arụ ọrụ oge niile maka ụlọ ọrụ buru ibu, ọkachamara ma ọ bụ nke nwere mkpa pụrụ iche na saịtị ndebiri agaghị enwe ike ịkọwa.
Ndammana, m ele mmadụ anya n'ihu ebe m gị n'ụlọnga na-emepụta "oké ọnụ" omenala-e weebụsaịtị websites
Agbanyeghị, anyị anwalela n'oge gara aga iji ndebiri maka ndị ahịa anyị yana oge ka ukwuu, ha chọrọ imezi ya, gbanwee ya, ma "mee ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche" ma mechaa bụrụ omenaala ọfụma.
Ọzọkwa, anyị na-elezi anya nke ọma iji hụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gosipụtara nke ọma na atụmatụ nke weebụsaịtị. Nke a anaghị adị mfe ịmezu mgbe ị na-eji ndebiri.
N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eji ngwa weebụ akọwapụtara na saịtị ha dịka ndebanye aha ihe omume, katalọgụ ngwaahịa ndị siri ike, na ngwa ahịa iji jikwaa mkpọsa. Ngalaba ahia na ụlọ ọrụ ndị dị ka nke a dabere na anyị ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke bụ mgbatị na-enweghị ntụpọ nke ụdị ụlọ ọrụ dị. Saịtị dị ka nke a chọrọ ọrụ aka na nchacha iji hụ na ejiri ihe ndị a mejupụta na echeghị m na ndebiri ga-emeju n'ọnọdụ ndị a.
Ọ bụ saịtị "dị oke ọnụ" maka mmadụ niile? Mba. Naanị ka ị mata onye ahịa gị. Mgbe ụfọdụ, ndebiri dị mma. Oge ndị ọzọ, ọ bara uru maka oge na itinye ego iji mepụta saịtị pụrụ iche nke gosipụtara akara nke ụlọ ọrụ ahụ.